[YEPAMUTEMO] dr.fone - iOS Data Recovery: kupora dzadzimwa / Lost Data musi iOS namano
Wenyika 1st iPhone uye iPad date kupora software.
Highest kupora mwero iri indasitiri.
Kupora mifananidzo, mavhidhiyo, neshamwari, mashoko, anoti, kudanwa matanda, uye zvakawanda.
Kunoenderana matsva iOS namano.
Edza It Free Buy Now
Kurasika date haina akarasika. Tinogona kupora mafaira kubva zhinji zvakafanana apa.
Ona All Features
Other mamiriro ekunyepa
Kurasika date pashure fekitari Reset
Kurasika mashoko nokuda iOS update
Mudziyo akaomerera uye kwete kuteerera
Data zvisipo pashure jailbreak kana ROM kwepfumo
Mudziyo rakakiyiwa kana kukanganwa pasiwedhi
Atadza synchronize negadziriro yeparutivi
Ongorora & Preview dzadzimwa Data kuti Free
Unokwanisa kushandisa ichi iOS date kupora kuti atarise zvose dzadzimwa kana varasikirwa mashoko enyu iPhone, iPad kana iPod touch, uye vaone zvakadzama pachena.
Download uye View iCloud negadziriro yeparutivi Content kuti Free
Uchida kudhanilodha uye buritsa iCloud negadziriro yeparutivi faira? This iOS date kupora Software anoita iwe kuzviitira free. Edza uye imi muchaziva nayo.
Verenga Your iTunes negadziriro yeparutivi File kuti Free
Tose tinoziva kuti Apple haabvumiri vanhu kuverenga zviri iTunes negadziriro yeparutivi faira, apo ichi iOS date kupora Software anoita, uye zviri pachena.
1 Click kuna Preview & Print Data Your
Zviri kupfuura iOS date kupora chokushandisa. Kana ukaona mashoko ako Ongororo mugumisiro, unogona zvakananga kufanoziva uye kudhinda kugutsikana kana uine kudiwa zvakadaro. Chinhu chimwe-watinya basa.
Kupora Up kusvika 18 File Types
This iOS date kupora Software inoita kuti apore mashoko akafanana neshamwari, mashoko, mapikicha, anoti, dana nhoroondo, zviyeuchidzo, WhatsApp mashoko, uye zvakawanda, kusvika 18 faira mhando.
Zvokusarudza muchapora zvaunoda
Pashure kushanda pakuvheneka kwako iPhone, iPad kana iPod touch, kana mokusvinwa iTunes kana iCloud negadziriro yeparutivi mafaira, unogona kutoziva uye kusarudza chero zvinhu uchida kupora kuti kombiyuta yako kana mudziyo wako. Zviri zvachose kwamuri.
Shanda kwazvo iPhone, iPad uye iPod touch
Hazvinei uri kushandisa ichangobva iPhone 7, iPad Pro, kana yakare iPhone 4, iPad 1, ichi iOS mashoko kupora inowirirana zvakazara mienzaniso yose iPhone, iPad uye iPod touch.
This iOS date kupora Software ane kuverenga-chete zvachose software. harizovi kuchengeta, kuchinja kana achigarira maoko chero mashoko ari mudziyo wako kana ari ndipo pachinobatsirawo faira. Tinotora zvako pachako mashoko uye nhoroondo zvakakomba. nguva dzose uri munhu chete anogona kuwana nayo.
iOS Complete kugarisana
mhando dzose iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, uye iPad
Akatsigira faira mhando
Safari kuti bogmærke
App kuti mifananidzo
App kuti Video
zvinyorwa App raMwari
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac Os X 10.12 (macOS Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, kana 10.6
1GHz (32 ikakuruma kana 64 ikakuruma)
256 MB kana kupfuura RAM (1024MB Recommended)
Hard dhisiki Space
200 MB uye kupfuura vakasununguka nzvimbo
iOS 10.3, iOS 10, iOS 9 uye vaimbova
3 Data Recovery Nzira
Zvakananga tarisei foni yako kuti apore dzadzimwa mashoko
Kusvina yenyu iTunes negadziriro yeparutivi uye achapora mafaira dzakasiyana
Kusvina yenyu iCloud negadziriro yeparutivi uye achapora mafaira dzakasiyana
The soro kupora mwero iri indasitiri.
dr.fone kuti Guarantee
Nzwisisa, njodzi, uye hwakavimbika.
Edza mahara kwemazuva 30!
Edza nayo Free For Days 30!
Ongorora mashoko zvizere pamberi kupora
Kupora date zvose, kana kusarudza mafaira
Huripo date haringapiwi overwritten
Chete unogona kuwana nhoroondo yako
3 nyore nhanho: batanidza, tarisei uye achapora
30 zuva vakasununguka muedzo
NYORA A REVIEW
All dzadzimwa mapikicha anowanikwa. Akatora maminitsi anenge 30. Chirongwa chokugadza asingadi kutora nguva yakawanda. Kana uchiziva Chirungu, ipapo zvose Zvinokurumidza zvikuru. Ini achashandisa chirongwa vanenge zvashata. Tariro vabudirire kuzoita kuchikosha kwandiri mapikicha.
Ndinokutendai rubatsiro. Iwe dzinondibatsira ndiporese dzadzimwa mapikicha angu. chirongwa ichi ndiyo yakanaka. I zano kuti munhu wose kushandisa chirongwa ichi kana iwe zvinomuomera kuikanganwa mashoko anodiwa
Chirongwa Good. Anobatsira vanhu kuti apore dzadzimwa mafaira. Nemhaka creators. I vanokurudzira kushandisa yakawanda vanhu chaizvoizvo kudzorera Apps. Usatya kuisa chirongwa ichi. Nokuti kuchakubatsira kupora kwako dzadzimwa mhinduro
Tips & mazano
3 Nzira kupora Hapachisina Text Messages musi iPhone
How wokugadzirisa Data kubva akadonha Broken iPhone
How kuwanazve Call History musi iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Included)
How wokugadzirisa dzadzimwa mapikicha kubva iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Included)
How kuwanazve iPhone Data Lost pashure Kudzorera kuna Factory Settings
How kuwanazve dzadzimwa Video musi iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4S / 4
Sei dzosa WhatsApp Messages pamusoro iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS
How kuwanazve dzadzimwa iPhone Contacts Pasina negadziriro yeparutivi
How wokugadzirisa iMessages kubva iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Included)
Customers edu Vari Also kudhanilodha:
Isa dzakashongedzwa iOS maitiro nyaya yakaita kupora muoti, chena Apple Logo, dema nechidzitiro, looping pamusoro kutanga, etc.
Negadziriro yeparutivi nokudzosa chero chinhu pamusoro / mumwe mudziyo, uye ekisipoti chii uchida kubva negadziriro yeparutivi kuti kombiyuta yako.
WhatsApp Kutamisirwa, negadziriro yeparutivi & Dzosa
Uchatamisa iOS WhatsApp kuna iPhone / iPad / iPod touch / Android mano, kana negadziriro yeparutivi / ekisipoti kuti makombiyuta.